८ श्रावण २०७४
दैनिक उपयोग हुने वस्तुहरुमा अझ पनि त्यस्ता वस्तुहरु छन् जसको सहि प्रयोग बारेमा हामी धेरै अनविज्ञ नै छौ । ती वस्तुहरुको हाम्रो जीवनमा धेरै महत्व हुँदा हुँदै पनि हामी ती वस्तुहरु प्रयोग गर्ने बारेमा कहिल्यै पनि सोच्दैनौं । तर पनि हामीले अब आफ्नो आँखा र दिमाग दुबै खोलेर यो स्वीकारर्नु पर्छ कि ती मध्य धेरै वस्तुहरु हामीले सोचे भन्दा निकै नै कुशल र उपयोगी छन्…विस्तृत समाचार »
यी महिलाको यो बाछासँग जुन सम्बन्ध छ, त्यो थाहा पाएर तपाई पनि आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । कम्बोडिया निवासी किम हैंग नामक यी महिलाले यो बाछासँग विवाह गरेर त्यसलाई आफ्नो श्रीमान बनाएकी छन् । महिलाको विश्वास छ कि यो बाछा उनको अघिल्लो जन्ममा श्रीमान थिए, जो रोगको उपचारकै क्रममा बितेका थिए । उनका श्रीमानले यो बाछाका रुपमा पुनर्जन्म लिएका हुन् । यही कारण किमले यो बाछासँग विवाह गरिन्…विस्तृत समाचार »
​जनावर होइन मानिस पिँजडामा बस्नुपर्छ यो विचित्रको चिडियाखानामा
७ श्रावण २०७४
यदि तपाई चिडियाखाना घुम्न जानुभयो भने त्यहाँ तपाईले धेरै प्रकारका जनावरलाई पिँजडामा बन्द गरीएको देख्न सक्नुहुन्छ । तर आज हामी तपाईलाई यस्तो चिडियाघरको बारेमा जानकारी दिन्छौँ जहाँ खूँखार जनावर खुलेआम घुम्छन् तर मानिसहरु पिँजडामा बन्द हुन्छन् । तपाईलाई सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ तर यो कुरा साँचो हो । चीनको चौङ्गक्गिं शहरमा बनेको ‘लेहे लेदु वाइल्डलाइफ चिडियाखानामा मानिसहरुलाई जनावर हेर्नको लागी पिँजडामा बन्द हुनुपर्छ । यहाँ…विस्तृत समाचार »
मानिस यौन सन्तुष्टिको लागी कुन हदसम्म जान्छ भन्ने कुरा तपाईलाई पढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । चिनमा एक ३५ बर्षे व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य अङ्गमा दुख्न अनी पिसाब गर्ने बेलामा रगत निस्किन लागेपछि अस्पतालमा भर्ना गरीयो । उसलाई अस्पताल पुर्याइयो अनी यसबारेमा डाक्टरलाई जानकारी गराइयो । त्यसपछि डाक्टरले उसको अपरेशन गरे अनी मुस्किलले सुइहरु निकाले । जानकारी उनुसार उक्त व्यक्तिको गोप्य अङ्गमा सुइ लगाएको थियो । उसले आफ्नो…विस्तृत समाचार »
नक्कली लिंग बनाएर महिलासँग यौन सम्पर्क गर्ने महिलालाई ६ वर्ष जेल सजाय
कृतिम लिंग (प्रोस्थेटिक पेनिस) लगाएर पुरुष भन्दै महिलाहरुलाई धोका दिने एक जना महिलालाई अदालतले सजाय दिएको छ। बेलायतकी २७ वर्षीय गेल न्युलैंडले दुई वर्षअघि अनलाइनमा नक्कली प्रोफाइल बनाए, जसमा उनले आफूलाई पुरुषका रुपमा प्रस्तुत गरेकी छन् । यो घटना सन् २०१३ को हो । जसमा नोभेम्बर २०१५ मा यही अपराधका लागि आठ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । तर, पछि यो सजाय न्यायाधीशको फैसला निष्पक्ष…विस्तृत समाचार »
​बियरको खाली बोतलले बन्यो यति सुन्दर मन्दिर ! (फोटोफिचरसहित)
पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर, नपत्याई धरै छैन । हो, बियरको खाली बोतलले कति सुन्दर मन्दिर बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण थाइल्याण्डमा छ । थाइल्याण्डको सिसाकेट प्रान्तमा बियरका कयौं खाली बोतल प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको बौद्ध मन्दिर यही हो । तर, यो मन्दिरबारे व्यक्तिहरुका आ–आफ्ना धारणा छन् । कतिपयले खेर फालिएका खाली बियरका बोतल प्रयोग गरेर बनाइएको मन्दिर नमूना भएको बताएका छन् । कोही स्थानीयले…विस्तृत समाचार »
एउटी लेखिकालाई तनाव : कण्डम र पिल्सले पनि रोकेन गर्भ
हालै एक महिलाले यस्तो दाबी गरेकी छिन् कि गर्भनिरोधक चक्की खाए पनि गर्भ रोकिएन । यौन सम्पर्क गर्नुअघि र गरिसकेपछि प्रयोग गर्नुपर्ने गर्भनिरोधक साधन अपनाउँदा पनि आफू गर्भवती भएको उनको दाबी छ । पाँच वर्षको अवधिमा उनी चार पटक गर्भवती भएकी छिन् तर, यो उनको चाहना भने थिएन । २९ वर्षीया बेकी ग्लोवरको चर्चा अहिले यही कारण छ की उनलाई कुनै प्रकारको गर्भनिरोधकले प्रभाव नै…विस्तृत समाचार »
प्रहरीको हेलिकोप्टरबाट सेक्स गरिरहेको जोडीको फिल्म बनाएपछि....
बेलायतको दक्षिणी योर्कशरमा आफ्नो बगैंचामा सेक्स गरिरहेको एउटा जोडीको प्रहरीको हेलिकोप्टरबाट फिल्म बनाएको घटनाको सुनुवाई अदालतमा सुरु भएको छ। यो घटनामा बेलायतको दक्षिणी योर्कशरका दुई प्रहरी अधिकारी र दुई जना पाइलटविरुद्ध शेफिल्डको क्राउन कोर्टमा सुनुवाई सुरु भएको हो । ४२ वर्षीय मैथ्यु लुकास, ४७ वर्षीय ली वाल्स, ४५ वर्षीय मैथ्ु लुसेमोर र ६४ वर्षीय मलकोम रिभ्सले सरकारी उपकरणको दुरुपयोग गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।…विस्तृत समाचार »
भारत जहाँ श्रीमानले नै श्रीमतीलाई बेश्या बन्न बाध्य पार्छन् (फोटोफिचरसहित)
भारतको राजधानी दिल्ली नजिकै एउटा समुदायको बसोबास छ, जहाँ बुहारीलाई परिवारले नै यौन व्यवसायका लागि बाध्य बनाउने गर्दछ । रिपोर्टअनुसार दिल्लीको धरमपुरासहित कयौ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परना समुदायमा यो विचित्रको परम्परा धेरै पहिलादेखि चलिआएको छ। परना समुदायका विषयमा पैसिफिक स्टैंडर्ड (www.psmag.com)ले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई यौनधन्धा गराउने गर्दछन् र आम्दानी आफूले लिने गर्दछन् । सेक्स ट्राफिकिङविरुद्ध अभियान चलाइरहेको आफ्ने आप वुमन वर्ल्ड वाइडकी…विस्तृत समाचार »
तरकारीको होइन युवतीको हाटबजार, रकम तिर्नुस् दुलही बनाएर भर्जिन युवती लैजानुस्
संसारका कतिपय स्थानमा यस्ता बजार पनि छन्, जुन अलग विशेषताका कारण चिनिएका छन् । तर, के तपाईले कहिल्यै ब्राइड मार्केका बारेमा सुन्नु वा पढ्नु भएको छ ? जहाँ नवविवाहिता दुलही विक्रीका लागि राखिन्छ र यो बजारमा दुलही विक्री हुन्छन् । हो, बुल्गेरियामा स्टारा जागोर नामक स्थानमा हरेक तीन वर्षमा एकपटक बेहुलीको व्यापार हुने गर्दछ । यहाँ आएर बेहुलाले आफूलाई मन परेको बेहुली किनेर उसलाई आफ्नो…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 19 20 21 22 23 Older Last ›